2005 – Year – Alpha Premium
The 40 Year Old Virgin (2005) ##unicode ဒီတစ်ခါတော့ စိတ်ညစ်စရာတွေခဏတာမေ့ရင်းရယ်မောနိုင်ဖို့ Comedy ကားဟောင်းလေးတစ်ကားတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အန်ဒီဟာ တစ်ခါမှကိုလူပျိုရည်မပျက်ဖူးသေးတဲ့ အသက် ၄၀ အရွယ်လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ပါ။ သူကအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး အက်ရှင်ဇာတ်ကောင်ရုပ်တွေကို စုဆောင်းရတာလည်း ဝါသနာထုံသူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ အလုပ်ကယောက်ျားလေးတွေစုပြီး ပိုကာကစားပြီး ထွေရာလေးပါးလျှောက်ပြောကြရင်း လိင်ဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းရောက်သွားပါတယ်။ အန်ဒီတစ်ယောက် အစပိုင်းဖြီးဖြန်းပေမဲ့ သူလူပျိုဖြစ်နေသေးတဲ့အချက်က ဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အန်ဒီလူပျိုရည်ပျက်ရေးဟာ သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့တာဝန်ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်သွားပြီး လူပျိုကြီးရောင်းထွက်နိုင်အောင် အကြံဉာဏ်တွေမျိုးစုံပေးပြီး ကူညီကြပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့တစ်ခါမှအတွေ့အကြုံမရှိဖူးတဲ့ အန်ဒီတစ်ယောက် အကြံပေးတွေကြားထဲမှာ ဘယ်လိုတလွဲတချော်တွေဖြစ်မလဲ၊ လူပျိုကြီးတစ်ယောက် စွံနိုင်ဦးမှာလားဆိုတာကို ရယ်မောရင်းခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။ (R rated movie ဖြစ်ပါတယ်။) ##zawgyi ဒီတစ္ခါေတာ့ စိတ္ညစ္စရာေတြခဏတာေမ့ရင္းရယ္ေမာႏိုင္ဖို႔ Comedy ကားေဟာင္းေလးတစ္ကားတင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ အန္ဒီဟာ တစ္ခါမွကိုလူပ်ိဳရည္မပ်က္ဖူးေသးတဲ့ အသက္ ၄၀ အ႐ြယ္လူပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္ပါ။ သူကအီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္ၿပီး အက္ရွင္ဇာတ္ေကာင္႐ုပ္ေတြကို စုေဆာင္းရတာလည္း ဝါသနာထုံသူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ အလုပ္ကေယာက္်ားေလးေတြစုၿပီး ပိုကာကစားၿပီး ေထြရာေလးပါးေလွ်ာက္ေျပာၾကရင္း လိင္ဆက္ဆံတဲ့အေၾကာင္းေရာက္သြားပါတယ္။ အန္ဒီတစ္ေယာက္ အစပိုင္းၿဖီးျဖန္းေပမဲ့ သူလူပ်ိဳျဖစ္ေနေသးတဲ့အခ်က္က ဘူးေပၚသလိုေပၚသြားပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အန္ဒီလူပ်ိဳရည္ပ်က္ေရးဟာ သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕တာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သြားၿပီး လူပ်ိဳႀကီးေရာင္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ အႀကံဉာဏ္ေတြမ်ိဳးစုံေပးၿပီး ကူညီၾကပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔တစ္ခါမွအေတြ႕အႀကဳံမရွိဖူးတဲ့ အန္ဒီတစ္ေယာက္ အႀကံေပးေတြၾကားထဲမွာ ဘယ္လိုတလြဲတေခ်ာ္ေတြျဖစ္မလဲ၊ လူပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္ စြံႏိုင္ဦးမွာလားဆိုတာကို ရယ္ေမာရင္းခံစားၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦး။ (R rated movie ...
IMDB: 7.1/10 406,194 votes
The Holy Man 1 (2005) ##unicode ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ comedy ကားလေးတွေမှကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် The Holy Man ဆိုတဲ့ ထိုင်းဟာသကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ပထမဆုံးကားကတော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အဲ့အချိန်က ထိုင်းမှာနာမည်ကြီးလူကြိုက်များ ခဲ့တဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် နာမည်ကြီးဟာသသရုပ်ဆောင်Pongsak Pongsuwan ကအဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လူ့ဘဝတုန်းကဆိုးမိုက်ခဲ့ပေမယ့် အကျွတ်တရားရပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးဟာ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာမှာကျောင်းထိုင်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ် လူငယ်ပီပီ စိတ်ထက်ပြီး အကြံဉာဏ်တွေလည်းဆန်းသစ်တဲ့ဆရာတော်ဟာ ရွာမှာလိမ်စားနေတဲ့နတ်နန်းနဲ့ ပြိုင်ဘက်လိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် နတ်နန်းကလူလိမ်ကလည်းဆရာတော်ကိုရွာသားတွေမကိုးကွယ်အောင် မျိုးစုံကြံစည်ပါတော့တယ် ဆရာတော်အနေနဲ့ လူလိမ်တွေရဲ့နှောင့်ယှက်မှုကြားကနေရွာသားတွေအမြင်မှန်ရအောင်လုပ်နိုင်မလားဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာကြည့်ရှုရမှာပါ ဇာတ်လမ်းလေးကတော်တော်လည်းရယ်ရပြီး အပျင်းလည်းပြေတာမလို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ comedy ကားေလးေတြမွႀကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္ The Holy Man ဆိုတဲ့ ထိုင္းဟာသကားေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ပထမဆုံးကားကေတာ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တုန္းကထြက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲ့အခ်ိန္က ထိုင္းမွာနာမည္ႀကီးလူႀကိဳက္မ်ား ခဲ့တဲ့ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ နာမည္ႀကီးဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္Pongsak Pongsuwan ကအဓိကဇာတ္ေဆာင္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ လူ႔ဘဝတုန္းကဆိုးမိုက္ခဲ့ေပမယ့္ အကြၽတ္တရားရၿပီး ဘုန္းႀကီးဝတ္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါးဟာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ႐ြာေလးတစ္႐ြာမွာေက်ာင္းထိုင္ဖို႔ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္ လူငယ္ပီပီ စိတ္ထက္ၿပီး အႀကံဉာဏ္ေတြလည္းဆန္းသစ္တဲ့ဆရာေတာ္ဟာ ႐ြာမွာလိမ္စားေနတဲ့နတ္နန္းနဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္လိုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ နတ္နန္းကလူလိမ္ကလည္းဆရာေတာ္ကို႐ြာသားေတြမကိုးကြယ္ေအာင္ မ်ိဳးစုံႀကံစည္ပါေတာ့တယ္ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ လူလိမ္ေတြရဲ႕ေႏွာင့္ယွက္မႈၾကားကေန႐ြာသားေတြအျမင္မွန္ရေအာင္လုပ္ႏိုင္မလားဆိုတာကို ဇာတ္လမ္းထဲမွာၾကည့္ရႈရမွာပါ ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ္ေတာ္လည္းရယ္ရၿပီး အပ်င္းလည္းေျပတာမလို႔ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ review – Phyu Sin File Size – ...
The Holy Man 1 (2005)
Chok-Dee (2005) ##unicode အက်ရှင် ဇာတ်ကားကောင်း မျှော်နေတဲ့သူတွေအတွက် ၂၀၀၅ ခုနစ်က ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ Chok-Dee ဆိုတဲ့ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာအားကစား ဖြစ်တဲ့ မွေထိုင်းလက်ဝှေ့ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ဘဝကိုလွယ်လွယ်လေး နေခဲ့တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ရိုင်းရန် ( ပြင်သစ်အသံထွက်အားဖြင့် "ဟာရာနာ") ဟာ အလုပ်မှာ ရန်ဖြစ်ပြီး ထောင်ထဲရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာတော့ သူဘဝကို ပြောင်းလဲစေမယ့် လူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ ထိုသူဟာ အရင်က မွေထိုင်းလက်ဝှေ့ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ထိုးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာရည်မှန်းချက်မှ မရှိတဲ့ ရိုင်းရန်အတွက် အဲ့ဒီလူဟာ လမ်းပြကြယ်သဖွယ်ဖြစ်ကာ လက်ဝှေ့သမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ကိုပါ ရိုင်းရန် ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို အခြေခံလက်ဝှေ့အကွက်လေးတွေကို သင်ပေးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ လုဘာနရားအီ ဆိုတဲ့ သင်တန်းကျောင်းကို သွားပြီး ပညာဆက်လက်သင်ယူစေခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းကိုရောက်ပြီး သင်တန်းကျောင်းကို ရောက်တဲ့အခါမှာ အဲ့ထဲကို လွယ်လွယ်နဲ့ ...
IMDB: 6.2/10 633 votes
Pooh’s Heffalump Halloween Movie Winnie The Pooh, Heffalump Halloween The Movie ============================== ‌ဟောလိုးဝင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ မရှိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က KidZoneတို့ ပုတက်တို့ စွယ်စုံတို့ထဲမှာ ခရစ္စမတ်အထူးထုတ်တို့ ဟောလိုးဝင်းအထူးထုတ်တို့မှာပါတတ်တော့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသား အရာတွေပါပဲ။ နောက်ပိုင်းSuperNaturalလို စီးရီးတွေမှာပါတဲ့ ဟောလိုးဝင်းspecial episodeတွေနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ဟောလိုးဝင်းကို ပိုကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြတယ်။ အခုWinnie The Pooh,Heffalump Halloween Movieက ဒီနှစ်ဟောလိုးဝင်းမှာ ခင်ဗျားတို့ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဟောလိုးဝင်းVibeအရဆုံး Movieပါပဲ။ ဝကစ်ညဏ်ထိုင်းပြီး လုပ်သမျှတိုင်းက ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Winnie The Pooh ကလေးနဲ့ ဟောလိုးဝင်းကို တွဲမြင်ရမှာပါ။ အဆက်အဟပ်မတည့်သလို ထင်ကြမှာပေမယ့် ဟောလိုးဝင်း Vibeအရဆုံး လို့ပြောရင်မလွန်ပါဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဝယ်ဖူးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မွေးနေ့လက်ဆောင်ရဖူးတာဖြစ်ဖြစ် လူအတော်များများရဲ့ ဘဝကတော့ Winnie the Poohနဲ့ကင်းမယ်ထင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ပူးလ်က ရုပ်ရှင်ထက် အရုပ်လောကမှာ ပိုနာမည်ကျော်တာကိုး။ winnie the pooh စာရေးဆရာက လက်တွေ့ဘဝက ...
IMDB: 6.6/10 864 votes
Marathon မွေးရာပါ ဉာဏ်ရည်ချို့ယွင်းအားနည်းသူ ဖြစ်ပေမယ့် အဲ့လိူများစွာထဲကမှ နာမည်ကျော် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း… ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ယွန်းချိုဝမ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ အမေမွေးကတည်းက ဉာဏ်ရည်မမှီတဲကံကြမ္မာဆိုးနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့ရပါတယ် အမေဖြစ်သူက သစ်ပင်ကို သစ်ပင်ပါ ၊ ရေကို ဒါက ရေပါဆိုတာကအစ တစ်ခုချင်းပြောသင်ကြားပေးပေမယ့် ချိုဝမ့်ဘက်က ဘာတုံ့ပြန်မှုမှမရှိ မှတ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး အဲ့လိုကောင်လေးကို အမေဖြစ်သူက ငယ်ငယ်လေးကနေစ လူပျိုပေါက်ရောက်တဲ့အထိ မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံဘဲ ဒုတိယသား အငယ်ကောင်နဲ့ ခင်ပွန်းကိုပါ ဂရုမစိုက်နိုင်သည်အထိ ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ပါတယ်… တနေ့ ချိုဝမ်ဟာ ၁၀ကီလိုမီတာ အပြေးပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်တော့ တတိယဆုရခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်နေခဲ့လေရဲ့… ချို့တဲ့နေတဲ့ သားဖြစ်သူက ဆုရခဲ့တဲ့အပြင် ပြေးနေရတိုင်း ပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့ သားရဲ့အမူအယာကို အမေဖြစ်သူက သတိထားမိတဲ့အခါ ချို့ဝမ့်ကို မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ နည်းပြဆရာကိုပါ ငှါးပြီး စနစ်တကျလေ့ကျင့်စေခဲ့ပါတယ် မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းအားနည်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် မာရသွန်ကမသင့်တော်ဘူး မဖြစ်သင့်ဘူးစတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိအားတွေကြား နည်းပြဆရာကောင်း တစ်ယောက်ကို ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး ချိုဝမ်ဟာ ...
IMDB: 7.8/10 2,026 votes
Blood Rain (2005) ##unicode ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းမှာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံဖွယ် လူသတ်မှုတွေတစ်ပုံတစ်ခေါင်းနဲ့ပြည့်နက်နေခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီလူသတ်မှုတွေဟာလည်း ရက်ရက်စက်စက်နဲ့ စနစ်တကျကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် လူသတ်တရားခံကလည်း ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ လုံးဝမသိ မခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး ကျွန်းလေးမှာရှိနေသူတွေကတော့ အငြိုးကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့လက်စားချေမှုလို့ ယုံကြည်ထားကြကာ ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ကြပါတယ် အထက်ကနေ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူကိုစေလွှတ်ပြီး ဒီမတရားသတ်ဖြတ်မှုကြီးကိုဖော်ထုတ်စေပါတယ် အလွန်ထက်မြတ် တိကျဖြောင့်မတ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ အဲ့ဒီသတ်ဖြတ်မှူကြီးရဲ့ ကွင်းဆက်တွေဟာ တစ်ခုချင်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ်က မတရားစွပ်စွဲသတ်ဖြတ်ခံခဲ့တဲ့ တရားသူကြီးကန်ဆိုသူရဲ့အမှူနဲ့ဆက်စပ်နေတာကို သိခဲ့ရပြီးနောက် ခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်လျက်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့လူသတ်မှူတွေဟာ တကယ်ပဲ တရားသူကြီးကန်ဝိညဉ်ရဲ့ လက်စားချေမှူလား တရားသူကြီးကန် မတရားသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာရဲ့ အကြောင်းအရင်းကရော ဘာလဲဆိုတာ နောက်ပိုင်းအကုန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် ရက်ရက်စက်စက် သွေးထွက်သံယို သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ ခြောက်ခြားစရာတွေကို ကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေအဖို့ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ ##zawgyi ကြၽန္းေလးတစ္ကြၽန္းမွာထိတ္လန႔္ေၾကာက္႐ြံဖြယ္ လူသတ္မႈေတြတစ္ပုံတစ္ေခါင္းနဲ႔ျပည့္နက္ေနခဲ့ပါတယ္ အဲ့ဒီလူသတ္မႈေတြဟာလည္း ရက္ရက္စက္စက္နဲ႔ စနစ္တက်ကိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ထားတဲ့ပုံစံမ်ိဳးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ လူသတ္တရားခံကလည္း ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတာ လုံးဝမသိ မခန႔္မွန္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး ကြၽန္းေလးမွာရွိေနသူေတြကေတာ့ အၿငိဳးႀကီးတဲ့ဝိညာဥ္ရဲ႕လက္စားေခ်မႈလို႔ ယုံၾကည္ထားၾကကာ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနခဲ့ၾကပါတယ္ အထက္ကေန အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးသူကိုေစလႊတ္ၿပီး ဒီမတရားသတ္ျဖတ္မႈႀကီးကိုေဖာ္ထုတ္ေစပါတယ္ အလြန္ထက္ျမတ္ တိက်ေျဖာင့္မတ္တဲ့စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အဲ့ဒီသတ္ျဖတ္မႉႀကီးရဲ႕ ကြင္းဆက္ေတြဟာ တစ္ခုခ်င္းေပၚလာခဲ့ပါတယ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ႏွစ္က မတရားစြပ္စြဲသတ္ျဖတ္ခံခဲ့တဲ့ တရားသူႀကီးကန္ဆိုသူရဲ႕အမႉနဲ႔ဆက္စပ္ေနတာကို သိခဲ့ရၿပီးေနာက္ ခုလက္ရွိျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့လူသတ္မႉေတြဟာ တကယ္ပဲ တရားသူႀကီးကန္ဝိညဥ္ရဲ႕ လက္စားေခ်မႉလား တရားသူႀကီးကန္ မတရားသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းကေရာ ဘာလဲဆိုတာ ေနာက္ပိုင္းအကုန္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္ ရက္ရက္စက္စက္ ေသြးထြက္သံယို သတ္ျဖတ္မႈေတြနဲ႔ ေျခာက္ျခားစရာေတြကို ႀကိဳက္တတ္တဲ့သူေတြအဖို႔ ...
Pooh’s Heffalump Movie [Unicode] အိမ်မှာနေရတာ ပျင်းဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ ကျွန်တော်နဲ့ တူတူ ငယ်ငယ်တုန်းကကြည့်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းလေး ပြန်ကြည့်ရင်း 2005 ခေတ်ကို ပြန်သွားကြတာပေါ့ များပြားလှတဲ့ Pooh ဇာတ်ကားလေးတွေထဲကမှ အခုတစ်ခေါက် တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Pooh’s Heffalump movie လေးပဲဖြစ်ပါတယ် 2005 ခေတ်ကကားဆိုတော့ အရောင်ထွက်ကတော့ ဒီခေတ်လို လင်းရှင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မှိန်မှိန်လေးနဲ့ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လို ကာလာလေးတွေနဲ့ ကာတွန်းကားတွေကို ပိုသဘောကျတယ်ဗျ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က နေဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တောအုပ်လေးထဲက နေချင်စရာ သစ်သားအိမ်လေးတွေကလည်းလုံးဝ ငယ်ဘဝကို ပြန်လွမ်းစေပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Pooh တို့ဘော်ဒါ လေးယောက် တောအုပ်ထဲမှာနေကြရင်း တစ်ရက်ကျတော့ Heffalump တွေကို သွားဖမ်းဖို့ ဖြစ်လာပါတယ် Heffalump တွေကို သူများပြောတာပဲကြားဖူးပြီး ဆိုးရွားတဲ့ကောင်လေးတွေလို့ ထင်ထားရာက တကယ်ကြုံလာတော့ အထင်နဲ့အမြင် ဘယ်လိုလွဲနေမလဲ Heffalump တွေကရော သူတို့ကို ဘယ်လိုထင်နေလဲဆိုတာ ချစ်စရာဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ ကြည့်ရှူရမှာပါ Heffalump ပေါက်စ Lumpy လေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သီချင်းဆိုသံလေးတွေကလည်း ဇာတ်ကားလေးကို ပိုပြီး အသက်ဝင်သွားစေတယ်ဗျ အားလုံးက ...
The Great Raid (2005) ##unicode The Great Raid ဇာတ်ကားကတော့ Americanစစ်ကားကြိုက်သူတွေအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ကားပါ။ 1941မှာဂျပန်တွေကပုလဲဆိပ်ကမ်းကိုဗုံးကြဲပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်ကိုပါသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲမှာအမေရိကန်စစ်သားတွေကိုလက်နက်ချစေခဲ့ပြီးတော့စစ်အကျဉ်းသားအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ မနီလာမြို့မှာလဲဖိလစ်ပိုင်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုနှိပ်စက်ညှင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်အကျဉ်းသားတွေကိုဆေးဝါးထောက်ပံပေးတဲ့မြေအောက်စစ်ဆင်ရေးသမားတွေကိုလဲသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဖမ်းဆီးခံအကျဉ်းသားတွေကိုလဲအစာအငတ်ထားပြီးညှင်းပန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးခံနီးမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ဖွဲ့ကဒေသခံဖိလစ်ပိုင်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဂျပန်တပ်စခန်းက စစ်အကျဉ်းသား၅၀၀ကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတဲ့ကားဖြစ်တယ်။ Captain Prince ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်စစ်သားတပ်ဖွဲ့ကဂျပန်စစ်စခန်းကိုဘယ်လိုဝင်ရောက်စီးနင်းလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုရမယ့် ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi The Great Raid ဇာတ္ကားကေတာ့ Americanစစ္ကားႀကိဳက္သူေတြအႀကိဳက္ေတြ႕ေစမဲ့ကားပါ။ 1941မွာဂ်ပန္ေတြကပုလဲဆိပ္ကမ္းကိုဗုံးႀကဲၿပီးေတာ့ဖိလစ္ပိုင္ကိုပါသိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲမွာအေမရိကန္စစ္သားေတြကိုလက္နက္ခ်ေစခဲ့ၿပီးေတာ့စစ္အက်ဥ္းသားအေနနဲ႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားပါတယ္။ မနီလာၿမိဳ႕မွာလဲဖိလစ္ပိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကိုႏွိပ္စက္ညႇင္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္အက်ဥ္းသားေတြကိုေဆးဝါးေထာက္ပံေပးတဲ့ေျမေအာက္စစ္ဆင္ေရးသမားေတြကိုလဲသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဖမ္းဆီးခံအက်ဥ္းသားေတြကိုလဲအစာအငတ္ထားၿပီးညႇင္းပန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးခံနီးမွာအေမရိကန္စစ္တပ္ဖြဲ႕ကေဒသခံဖိလစ္ပိုင္ေတြနဲ႔လက္တြဲၿပီးေတာ့ဂ်ပန္တပ္စခန္းက စစ္အက်ဥ္းသား၅၀၀ကိုကယ္ထုတ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္းကို႐ိုက္ျပထားတဲ့ကားျဖစ္တယ္။ Captain Prince ဦးေဆာင္တဲ့အေမရိကန္စစ္သားတပ္ဖြဲ႕ကဂ်ပန္စစ္စခန္းကိုဘယ္လိုဝင္ေရာက္စီးနင္းလဲဆိုတာ ၾကည့္ရႈရမယ့္ ​ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္။ Review – Myet Chel File Size – 1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p BR-rip Duration… 2h 14min Genre :Action, Drama, War Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Myet Chel Encoded by Arrow
IMDB: 6.7/10 21,062 votes
Typhoon (2005) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ မင်းသားကြီးLee jung jaeနဲ့Jang Dong gunတို့နှစ်ယောက်ပါဝင်တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ မြောင်ရှင်းက တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုနှစ်နိုင်ငံကြားပြသာနာကြောင့် ငယ်စဉ်ကမိဘတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ မြောင်ရှင်းဟာကြီးလာတော့ ပင်လယ် ဓားမြတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကို ဖျက်စီးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားသူပါ။ သူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက် တာဝန်ပေးချင်းခံရတဲ့သူကတော့ ရေတပ် အရာရှိ ကင်ဆဲဂျွန်း ပဲဖြစ်ပါတယ် သူကမြောင်ရှင်းအမ မြောင်ဂျုကိုငါးစာအနေနဲ့သုံးကာ ရှင်း ကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွက်အန္တရာယ်ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးပမ်းရပါတော့တယ်။ နိုင်ငံရေး ကစားကွက်တွေကြားမှာ ဘဝပျက်ခဲ့ရပြီး နာကျည်းမုန်းတီးမှုတွေနဲ့ ပင်လယ်ဓားမြဖြစ်လာတဲ့ ရှင်းဟာ မိသားစုအတွက်ဘယ်လိုလက်စားပြန်ချေမလဲ ရေတပ် အရာရှိ ပတ်ဆဲဂျွန်းကပဲ ရှင်းကို တားဆီးလိုက်နိုင်မလားဆိုတာတော့ Movie ထဲမှာ ကြည့်လိုက်ပါရှင် ဒီကားမှာနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ပြီးတော့ တောင်နဲ့မြောက်နှစ်နိုင်ငံအရှုပ်အထွေးတွေကိုကြည့်ရှုရမှာမို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကားလေးဖြစ်တယ်။ ##zawgyi အခုတင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ မင္းသားႀကီးLee jung jaeနဲ႔Jang Dong gunတို႔ႏွစ္ေယာက္ပါဝင္တဲ့ကားျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာင္ရွင္းက ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ေျမာက္ကိုရီးယားကိုႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားျပသာနာေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကမိဘေတြကိုဆုံးရႈံးခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာင္ရွင္းဟာႀကီးလာေတာ့ ပင္လယ္ ဓားျမတစ္ေယာက္ျဖစ္လာၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ေျမာက္ကိုရီးယားကို ဖ်က္စီးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားသူပါ။ သူ႔ကိုဖမ္းဆီးဖို႔အတြက္ တာ၀န္ေပးခ်င္းခံရတဲ့သူကေတာ့ ေရတပ္ အရာရွိ ကင္ဆဲဂြၽန္း ပဲျဖစ္ပါတယ္ သူကေျမာင္ရွင္းအမ ေျမာင္ဂ်ဳကိုငါးစာအေနနဲ႔သုံးကာ ရွင္း ကိုဖမ္းဆီးဖို႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္အႏၲရာယ္ကိုတားဆီးဖို႔ႀကိဳးပမ္းရပါေတာ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ေတြၾကားမွာ ဘဝပ်က္ခဲ့ရျပီး နာက်ည္းမုန္းတီးမႈေတြနဲ႔ ပင္လယ္ဓားျမျဖစ္လာတဲ့ ရွင္းဟာ မိသားစုအတြက္ဘယ္လိုလက္စားျပန္ေခ်မလဲ ေရတပ္ အရာရွိ ပတ္ဆဲဂြၽန္းကပဲ ရွင္းကို တားဆီးလိုက္ႏို္င္မလားဆိုတာေတာ့ Movie ထဲမွာ ၾကည့္လိုက္ပါရွင္ ဒီကားမွာနာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြပါဝင္ၿပီးေတာ့ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ႏွစ္ႏိုင္ငံအရႈပ္အေထြးေတြကိုၾကည့္ရႈရမွာမို ႔စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ကားေလးျဖစ္တယ္။ Review – Shoon ...
IMDB: 5.8/10 1,227 votes
IMDB: 5.4/10 90,179 votes
xXx: State of the Union (2005) XXX ဆိုလို့ 18+ မထင်လိုက်ပါနဲ့ . 2002ခုနှစ်မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Vin Diesel ရဲ့အက်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ 2002 မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး 2005မှာ နောက်ထပ် xXx 2005 ထပ်ထွက်ခဲ့ပြီး ထပ်မံနာမည်ကြီးခဲ့ရပြန်ပါတယ်၊ ခုလည်း 12နှစ်ကြာခဲ့ပြီး လာမယ့် 2017မှာ ဒီကားကထပ်မံထွက်ဦးမှာပါ ၊ အဲ့တော့ 2017 မှာ ထွက်ရင်ဇာတ်ရည် လည်လည်ကြည့်ရအောင် အရင်ကမကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ပရိသက်များ အတွက် အပိုင်း(၂) xXx (2005)ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ————————————————————————– XXX ဆိုလို႔ 18+ မထင္လိုက္ပါနဲ႔ . 2002ခုႏွစ္မွာ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ Vin Diesel ရဲ႕အက္႐ွင္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ 2002 မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး 2005မွာ ေနာက္ထပ္ xXx 2005 ထပ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ထပ္မံနာမည္ႀကီးခဲ့ရျပန္ပါတယ္၊ ခုလည္း 12ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီး လာမယ့္ 2017မွာ ဒီကားကထပ္မံထြက္ဦးမွာပါ ၊ ...
IMDB: 4.4/10 66,195 votes
Sin City Sin City (2005) ============ IMDb Rating – 8.0/10 #Unicode Sin Cityအကြောင်းပြောရရင် နည်းနည်းတော့ရှည်မယ်။ ဒီရုပ်ရှင်က ချီးကျူးစရာတော့ အတော်များပါမယ်။ ဒါရိုက်တာသုံးယောက်နဲ့ ဇာတ်လမ်း လေးပုဒ်ပါတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို ကြည့်ရတာတစ်ကွဲတစ်ပြားမဖြစ်သွားအောင် ချိတ်ဆက်ထားပုံတွေက သပ်ရပ်တယ်။ Graphic Novelတွေကို ပြန်ရိုက် ထားပေမယ့် Graphic Novelအတိုင်း ပေးဖတ်လိုက်သလိုမျိုး CGIကိုသုံးပြီးပြီး အမြင်ကိုဖမ်းစားထားတာကလည်းဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ။ အဖြူအမဲလုပ်လိုက် ပြချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲ အရောင်ထည့်ပေးလိုက် ပြကွက်တွေဟာ ဒီအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိမယ့် ပြကွက်တွေကိုပိုသိသာစေတယ်။ Narratorလည်းထည့် ဇာတ်ကောင်ရဲ့ အတွေးတွေကိုလည်း ပြထားတာပါ ပေါင်းလိုက်ရင် ဘာမှဖြည့်တွေးစရာမလိုလောက်အောင် ကြည့်ရလွယ်ကူတဲ့ Art Filmတစ်ခုကို တည်ဆောက် ပေးထားသလိုပဲ။ တစ်ချို့အကွက်တွေကတော့ Quentin Tarantinoဆန်တယ်။ ဆန်ဆို ဒီကားမှာသူက Guest Directo။ သူကိုယ်တိုင်၀င်ရိုက်ခဲ့တာက ငါးမိနစ်လောက်ပဲပါပေမယ့် ကျန်တာတွေလည်း သူအကြံပေးခဲ့မယ်ထင်တယ်။ ချေးအပြည့်နဲ့ အိမ်သာခွက်ထဲ ခေါင်းနှစ်တာတွေကားဘေးက တရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး စစ်မေးတာတွေ လိင်အင်္ဂါကို ဆွဲဖြုတ်တာတွေ ခြေတွေလက် တွေဖြတ်ပြီး ကျန်တဲ့ကိုယ်ကို ခွေးကျွေးတာတွေ မထင်သလို ...
IMDB: 8.0/10 731,577 votes
Son of the Mask ေတာင္းဆိုသူ မ်ားေနတဲ့ The Mask နဲ႕ သူ႕ရဲ႕ အဆက္ Son of the Mask ကို တင္ေပးလိုက္ပါျပီ။ ဒီဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ မ်က္နွာဖံုးရဲ႕ စြမ္းအင္နဲ႕ တိုက္ဆိုင္ျပီး ေမြးဖြားလာတဲ့ကေလး နဲ႕ ကေလးကို မနာလိုတဲ့ ေခြးေလးက မ်က္နွာဖံုးကို ခိုးျပီး တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေခ်ာက္ခ်ၾကတာေတြ….. မ်က္နွာဖံုးရဲ႕ မူလပိုင္ရွင္ နတ္ဘုရား လိုကီဟာ သူ႕ဖခင္ရဲ႕ အတင္းခိုင္းေစမႈေၾကာင့္ မ်က္နွာဖံုးရွာပံုေတာ္ထြက္ရင္း …..
IMDB: 2.2/10 51,186 votes
Fun with Dick and Jane Fun with Dick and Jane(2005) IMDb….6.1 Jim Carrey ကားေတြဟာ ဟာသျပကြက္ေတြဖန္တီးရင္း လူ႕သေဘာ သဘာ၀ ေတြကုိ အေကာင္းမြန္ဆုံးဖန္တီး တင္ဆက္ေပးထားတာေၾကာင့္ ကမၻာေက်ာ္ၿပီးလူႀကဳိက္မ်ားတာအားလုံးလည္းအသိပါ… … ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ Jim Carrey ဟာ Dick ဆုိတဲ့နာမည္နဲ႕သရုပ္ေဆာင္ထားၿပီး သူဟာ ဂလိုဘိုဒိုင္းဆိုတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ပါ… သူ႔မွာ Jane ဆိုတဲ့ ဇနီးျဖစ္သူ နဲ႔အတူ သားေလးအပါအဝင္ မိသားစု သံုးေယာက္ရွိပါတယ္. . Dick ဟာ သူ႔ ကုမၸဏီမွာ ဒုဥကၠဠ ေရြးခံရတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ျပႆနာေတြစပါေတာ့တယ္… ဒုဥကၠဌရာထူးတိုးၿပီမို႔ ဇနီးကိုလဲ အလုပ္ထြက္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္… သူ႕ရဲ႕လစာနဲ႕ တစ္မိသားစုလုံးကုိေထာက္ပံ့ႏုိင္ၿပီလုိ႕ သူကတြက္ထားတာကုိးး…. ကံဆိုးတာက မၾကာခင္မွာပဲ ဂလိုဘိုဒိုင္းကုမၸဏီရဲ႕ CEO Jack ဟာ ရွယ္ယာေတြကို ေရာင္းၿပီး ကုမၸဏီႀကီး ၿပိဳလဲခဲ့ပါတယ္. ..Dick အပါအဝင္ ဂလိုဘိုဒိုင္းက ဝန္ထမ္းအားလံုး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ပါတယ္… အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားတဲ့ Dick ဟာ ...
IMDB: 6.2/10 131,590 votes
IMDB: 7.4/10 122,579 votes
IMDB: 6.2/10 89,712 votes
My Girl and I [Unicode] လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ အချစ်ဦးကိုတော့ မေ့နိုင်တဲ့လူရယ်လို့ ရေရေရာရာမရှိကြပါဘူး အချစ်ဦးဆိုတာ အချစ်ခရီးရဲ့စတင်ရာပဲမဟုတ်ပါလား…. အချစ်ဦးကို ၁၀ နှစ်တာဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမယ့် အခုချိန်ထိမမေ့နိုင်သေးတဲ့ကောင်လေး ဆူဟို… နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သူ့ကိုပဲသတိရနေပေးဖို့ တတွတ်တွတ်တောင်းဆိုနေခဲ့တဲ့ ဆူအွန်း… ငယ်ကအချစ်အနှစ်တစ်ရာဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အပြန်အလှန်အချစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခွဲခွာခဲ့ရပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ အချစ်တွေက မလျော့သွားခဲ့ကြပါဘူး … ကျောင်းသားဘဝရင်ခုန်စရာလေးတွေ ချစ်ခြင်းတရားတွေ ပျော်ရွှင်မှု ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့အတူ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ချစ်ခြင်းတရားတွေကို စီးမြောလိုက်ပါခံစားနိင်မယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် မတ်မတ်အွန်ဆောရဲ့ငယ်ဘဝ အလှလေးတွေကိုမြင်ရဦးမှာနော်…။ ( အညွှန်းရေးသားထားသူကတော့ Shoon Thu Thu Chain ဖြစ်ပါတယ် ) [Zawgyi] လူတိုင္းရဲ႕ဘဝမွာ အခ်စ္ဦးကိုေတာ့ ေမ့ႏိုင္တဲ့လူရယ္လို႔ ေရေရရာရာမရွိၾကပါဘူး အခ်စ္ဦးဆိုတာ အခ်စ္ခရီးရဲ႕စတင္ရာပဲမဟုတ္ပါလား…. အခ်စ္ဦးကို ၁၀ ႏွစ္တာဆုံးရႈံးလိုက္ရေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိမေမ့ႏိုင္ေသးတဲ့ေကာင္ေလး ဆူဟို… ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ သူ႔ကိုပဲသတိရေနေပးဖို႔ တတြတ္တြတ္ေတာင္းဆိုေနခဲ့တဲ့ ဆူအြန္း… ငယ္ကအခ်စ္အႏွစ္တစ္ရာဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း အျပန္အလွန္အခ်စ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ သူတို႔ႏွစ္ဦး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခြဲခြာခဲ့ရေပမယ့္ ရင္ထဲမွာေတာ့ အခ်စ္ေတြက မေလ်ာ့သြားခဲ့ၾကပါဘူး … ေက်ာင္းသားဘဝရင္ခုန္စရာေလးေတြ ခ်စ္ျခင္းတရားေတြ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ဝမ္းနည္းမႈေတြနဲ႔အတူ ...